तिथि मेरो पत्रु »3सुझाव उत्तम अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल सिर्जना गर्न
अनलाइन एक डेटिङ प्रोफाइल स्थापना एक मोडबाट र एक डरलाग्दो विचार सबै एकैचोटि दुवै हुन सक्छ. उत्तेजना स्पष्ट शायद तपाईं बस जस्तो देखिने सीमा-कम इन्टरनेट मार्फत विशेष कसैलाई भेट्न सक्छ भन्ने कुरा विचार आउँछ. बम विस्फोटमा आफ्नो प्रोफाइल मा राख्न ठ्याक्कै के सोच को विचार आउँछ. तपाईं अधिकांश मानिसहरू जस्तै हुनुहुन्छ भने, तपाईं शायद आफैलाई को सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधित्व अगाडी राख्न चाहन्छु, तर तपाईं अझै त्यसो गर्न कसरी थाहा छैन. आफैलाई वर्णन अप्ठ्यारो र भ्रामक हुन सक्छ. यो काम आवेदन लागि एक पत्र कवर लेखन जस्तै एक बिट लाग्न सक्छ, तथ्य के तपाईं साँच्चै क्षमता मिति-छैन क्षमता मालिकहरुलाई मा तान्न कोशिश गर्दै छन् रहिरहन्छ! किनभने एक अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल बनाउन जटिलताहरुलाई, एक प्रतिबद्ध वास्तवमा धेरै कम्पनीहरु छन् उद्देश्य-कि लेखन इन्टरनेट डेटिङ प्रोफाइलको. खुसीको, "मेरो बारेमा" तपाईं आफ्नो प्रोफाइल बनाउन सक्ने विभिन्न तरिका / अधिक रोचक खण्ड छन्, एक "व्यावसायिक" तिर्न बिना लागि यो गर्न.
कथा सुनाउँछन्: सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोफाइल लेखन सुझाव को एक सम्झना गर्न, आफ्नो प्रोफाइल मा दृष्टान्तको निश्चित कम्तीमा तपाईं अझ बढी जान्न प्राप्त गर्ने इच्छा गर्न मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न एक सिद्ध तरिका हो. जस्तै वक्तव्य "म एक राम्रो छु, मजा, साहसिक मान्छे "वास्तवमा एक व्यक्तिको बारेमा धेरै सानो प्रकट सामान्य हो र. तथापि, ती वर्णन प्रत्येक प्रतिनिधित्व गर्ने एक छोटो किस्सा प्रदान गर्ने छनौट तपाईं एकदम अधिक अविस्मरणीय र रोचक बनाउन हुनेछ. (उदाहरणका लागि, "एक समय ग्रामीण घाना मा जबकि ..."). निस्सन्देह, यो तपाईं छोटो यी कथाहरू रहने महत्वपूर्ण छ; मात्र यो सजिलै पठनीय आफ्नो प्रोफाइल राखन हुनेछ, तर यो पनि तपाईंको मिति लागि कुराकानी विषय लागि एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्न सक्छन् ("... त्यसैले ... भनेर समय तपाईं बारेमा थप बताउन"). यस गर्न अर्को तरिका सरल सामान्य बयान लागि विशिष्ट उदाहरण प्रदान गर्न छ. उदाहरणका लागि, "कुनै दिन म तपाईं मेरो हस्ताक्षर BBQ करङ र coleslaw बनाउन पनि सक्छ" भन्दै भन्दै भन्दा बढी अविस्मरणीय र सुन्दर छ, "म वास्तवमा ग्रिल मा बाहिर खाना बनाउन मन।"
प्रश्न को निमंत्रण: पहिलो कुरा गर्न एक प्राकृतिक पालन माथि, आफ्नो डेटिङ प्रोफाइल तपाईं प्रश्न सोध्ने अरूलाई लागि अवसर प्रदान गर्दछ भन्ने निश्चित गर्न. सीधा यसो चाहे (जस्तै, "बारे थप मलाई कुरा गर्न नहिचकिचाउनुहोस् ...") वा केवल सजिलै अव्यक्त, तपाईं बारेमा विशिष्ट जानकारी मा सोधपुछ निम्तो दिनुहुन्छ प्रोफाइल तपाईं खुला छन् भनेर देखाउँछ, साथै व्यक्ति निम्त्याउनु. अर्को शब्दमा, आफ्नो प्रोफाइल मा लेखिएको छ कि शैली पूर्ण सम्पूर्ण आवाज र बन्द बन्द भने, त्यसपछि अरूलाई कि तपाईं पनि हो बाटो हो सोच्न सक्नुहुन्छ. खुला जस्तै लग द्वारा खुला आफ्नो डेटिङ विकल्प राख्नुहोस्, निम्त्याउनु व्यक्ति आफैलाई.
इमानदार हुनुहोस्: अन्तमा, इमानदारी जाहिर छ कुनै पनि सफल डेटिङ अनुभव गर्न एक प्रमुख घटक, अनलाइन या छैन. आफ्नो प्रोफाइल मात्र वास्तविकता को exaggerations हो कि अनुभव वा "विशेषज्ञता" overemphasize गर्न यस्तो तरिका मा लेखिएको छ भने, आफ्नो प्रोफाइल हेर्नका अरूलाई शायद ढिलो होस् वा पछि बताउन सक्षम हुनेछ. बेइमान संचार मा शुरू राम्रो खुट्टा कहिल्यै छ. तथापि, यस यो तपाईं या त अनलाइन आफ्नो शिक्षाविदों र सम्पत्ति सबै विषयमा पूर्ण प्रकटीकरण प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने होइन. उदाहरणका लागि, कारण अरूलाई बस आफ्नो आय लागि केटासित गर्ने प्रयास हुन सक्छ कि डर आफ्नो वर्तमान व्यवसाय प्रकट गर्न चाहने मात्र होइन राज्य गर्न वैध कारण छ, व्यक्तिगत वर्णन सट्टा "हाडजोर्नी" "चिकित्सा क्षेत्रमा". यस अवस्थामा, कुनै प्रयास तपाईं वास्तविकता भन्दा "राम्रो" ध्वनि हुन् बनाउन गरिएको छ.